‘जनजाति नेताबाटै जनजातिमाथि गद्धार’ -::DainikPatra
‘जनजाति नेताबाटै जनजातिमाथि गद्धार’
बुटवल  । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव प्रा.डा. ओम गुरुङले आदिवासी जनजाति नेताहरूबाटै जनजातिमाथि गद्धार भएको आरोप लगाएका छन् । प्रदेशको नामाङ्कन गर्दा जनजाति नेताबाट धोका भएको भन्दै उनले त्यस्ता नेतालाई चिन्न र वहिष्कार गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद्, रूपन्देहीले २४ औं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा बुटवलको मिडियाचोकमा आयोजना गरेको दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गुरुङ सो आरोप लगाएका हुन् । प्रदेश ४ को नामाकरण मगराँत–तमुवान नराखी गण्डकी राखेर पहिचान विरोधी काम आदिवासी जनजाति नेताहरूबाटै भएको उनले बताए ।
‘आदिवासी जनजातिको पहिचान खोजिएको हो, भूगोल र नदीनालाको होइन’, उनले भने । पहिचानको आधारमा नामाकरण नगरिए त्यो आदिवासी जनजातिलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै संघर्षको माध्यमबाट खारेज गरिने उनले चेतावनी दिए । दुई तिहाइको दम्भमा अहिलेको सरकारले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई सिन्की सरह लिएको टिप्पणी गए ।
आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार खोसेर ल्याइएको प्रतिगामी संविधान खारेज गर्नुपर्ने उनले जोड दिए । उनले खोसिएका आदिवासी जनजातिका अधिकार प्राप्तीका लागि संगठित सशक्त आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए । नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहनसिंह गोलेले आदिवासी जनजातिको पहिचान मेटिने गरी प्रदेश ५ को नामाकरण गरिए त्यो अमान्य हुंने चेतावनी दिएका छन् । उनले सरकार दुई तिहाईको दम्भमा पञ्चायती शैलीमा अगाडि बढेको दावी गरे । आदिवासी जनजातिको लडाई अस्तित्वसंग जोडिएको भन्दै उनले लडाइँलाई राजनैतिक रूपमा लैजानुपर्ने बताए ।
नेपाल मगर संघका केन्द्रीय सल्लाहकार केशव सूर्यवंशी मगरले अधिकार स्थापित गर्नका लागि राज्यसँग आदिवासी जनजातिले वारपारको आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । आन्दोलनकै रूपमा मनाइएको दिवसले आदिवासी जनजातिलाई एकताको सूत्रमा बाध्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश ५ समन्वय परिषद्का सह–सचिव जयबहादुर छन्त्याल, नेपाल मगर संघ, रूपन्देहीकी अध्यक्ष गीता सारु लगायतले बोल्दै सशक्त आन्दोलनका लागि आदिवासी जनजातिहरू एक ढिक्का हुनुपर्ने बताएका थिए ।
महासंघका अध्यक्ष दलबहादुर छन्त्यालको अध्यक्षता, सचिव भिमबहादुर भुजेलको सञ्चालन तथा उपाध्यक्ष विमला गुरुङको स्वागतमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रम पूर्व महासंघले बुटवलको राजमार्ग चौराहस्थित लखन चोकमा रहेको प्रथम शहीद क्या. लखन थापामगरको शालिकमा माल्यार्पण गरेर आदिवासी जनजाति झाँकीसहित शुरु भएको ¥यालीले बुटवल बजार परिक्रमा गरी बुटवलको मिडियाचोकमा पुगेर दिवस मूल समारोहमा परिणत भएको थियो ।